Real Madrid oo dooneysa in Jose Mourinho uu jeex jeexo warqadihii Man United…(Aqri warbixin hor leh) – Gool FM
Real Madrid oo dooneysa in Jose Mourinho uu jeex jeexo warqadihii Man United…(Aqri warbixin hor leh)
Raage April 7, 2016
(Madrid) 07 Abriil 2016 – Madaxwaynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa ku riyoonaya weli inuu gacanta ku soo dhigo Jose Mourinho sida ay sheegayaan warar ka imaanaya Spain.
Warsidaha Spain ee Fichajes ayaa sheeganeysa in naadiga Galacticos ay doonayaan in macallinkii hore ee Chelsea uu jeex jeexo heshiiskii hor dhaca uu la galay Manchester United. Khabiirka La Liga Guillem Balague ayaa maanta daaha ka rogay in wakiilada tababaraha reer Portugal ay aaminsan yihiin inay heshiis la gaareen Red Devils.
Laakiin Man United weli ma ay xaqiijin xiisahooda waxaana la maleynayaa in Louis van Gaal uu sii wadi karo howsha uu u hayo kooxda ka ciyaarta Premier League. Sida ay sheegeyso Mundo Deportivo ee ka soo baxda Spain in Perez uu qiimeynayo inuu sii heysto Zidane ama uu ka takhaluso.
Midka ku soo guuleystay koobkii adduunka ee 1998 ayaa xilka tababaranimo kala wareegay Rafa Benitez horaantii sanadkan. Mourinho ayaa ka soo tagay Real Madrid 2013 laakiin weli si wayn ayaa looga tix galiyaa kooxda. Jose ayaa dib ugu soo laabtay Stamford Bridge oo uu la qaaday Premier League xilli ciyaareedkii tagay laakiin kaddib bilow xun uu ku bilowday xilli ciyaareedkan ayaa horseeday in albaabka loo tilmaamo bishii December.
Ma ogtahay in Yuto Nagatomo uu iska diiday inuu ku biiro Man United suuqii janaayo?